Thursday August 15, 2019 - 21:06:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mu'asasada Alkataa'ib garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay filim xiiso badan oo lagusoo bandhigayo weeraradii ay ciidankoodu ku qaadeen Hotelada Muqdisho.
Filimkan ayaa ah qeybtii 3aad ee silsilada la yiraahdo (فقاتلوا أئمة الكفر) waxaana lagusoo bandhigayaa duullaanadii iyo howlgalladii gaarka ahaa ee lagu beegsaday Hotellada waaweyn ee magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa hooyga iyo xafiisyada u ah madaxda DFS.
Muuqaalkan oo ah mid la daawan karo ku dhawaad muddo saacad ah ayaa lagusoo bandhigayaa xeyn Hotello ah oo ay beegsadeen Al-Shabaab iyo muuqaalka raggii Istish-haadiyiinta ahaa ee fuliyay weeraradaas.
Waxaa filimka kasoo muuqanaya madax iyo saraakiil dhowr ah oo katirsan Xarakada Al-Shabaab kuwaas oo sheegaya in ay sharci tahay beegsigan Hoteladan, waxaana filimka sidoo kale dadka ka shaafinayaa doodaha ku saabsan in Hotelladan ay yihiin goobo shacab, iyo khasaaraha dadka shacabka ah ka soo gaara weeraradaas iyo waxa ay Xarakadu u aragto.
Halkan toos uga degso MP4
Halkaan Ka Daawo Filimka oo Dhameystiran.